Kulula ukuyiqonda - IVIDIYO INCOKO-Uthando-intanethi!
Chatroulette (ukusuka isixhosa roulette - "roulette") yi ividiyo kwaye umbhalo incoko umdlalo ukuba usebenzisa okungaziwayo iinkcukacha ezibonelelwe ngu-a kwiwebhusayithiKule ndawo ivumela abasebenzisi zithungelana-intanethi kunye a i-seed engenamkhethe ekhethiweyo umntu.
Ngoku ke ixesha shiya lomsebenzisi kwi-touch nani kwaye ezisebenza kunye nomnye umntu kuba okwenene, incoko okanye phendla.
Le nkonzo kwaba yamiselwa ngo-2009 yi-Andrey Ternovsky, a Moscow esekelwe u, kwaye kwangoko yamiselwa ngo-2010. Clones le ndawo kuba popped phezulu omnye emva komnye kwaye qhubekeka ukukhulisa kwi ukusebenza, ngolohlobo kwi-Chatroulette, kodwa akukho mcimbi indlela ethandwa kakhulu ngabo.
807 musa ubalo imvelaphi.
Dating and communication # 1 Kurgan Chub, admission is free and without registration
esisicwangciso-mibuzo roulette ne-girls engenayo Dating zephondo ividiyo incoko amagumbi-intanethi ividiyo Dating site free ngaphandle ubhaliso fumana incoko roulette ividiyo ukuncokola nge-girls ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko-intanethi free ezimbalwa ividiyo Dating i-intanethi ividiyo incoko ividiyo Dating abafazi-intanethi